Open Beta3version update မှာ Face unlock feature ပါဝင်လာတဲ့ Oneplus 5! – AsiaApps
Open Beta3version update မှာ Face unlock feature ပါဝင်လာတဲ့ Oneplus 5!
January 2, 2018 January 3, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Open Beta3version update မှာ Face unlock feature ပါဝင်လာတဲ့ Oneplus 5!
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တုန်းက Oneplus company ရဲ့ Co-founder ဖြစ်သူ Carl Pei ဆိုသူက OnePlus5update အသစ်မှာ Face unlock feature ပါဝင်လာမယ့်အကြောင်းကို Twitter မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Carl ရဲ့ပြောကြားချက်အပြီး သိပ်မကြာတဲ့ရက်အနည်းအငယ်အတွင်းမှာပဲ Open Beta3ဆိုပြီး version အသစ်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၉ ရက်နေ့ကထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး Face unlock feature လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ Update မထွက်ခင်တုန်းကဆိုရင် Face unlock feature က Oneplus 5T မှာပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုထွက်ရှိထားတဲ့ Open Beta3ဟာ Android Version 8.0 ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး Oneplus5မှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Update မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ Feature တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Recorder အတွက် app ကို launcher မှာ Shortcut အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ System အပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Face unlock feature တိုးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Virbration ပိုင်းကို ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင် update လုပ်ပေးထားပါတယ်။ 5G connection ကိုအသုံးပြုရာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Error တွေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဒီ 5G update ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သိပ်တော့မဆိုင်လှပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီဇင်ဘာလအတွက် Android security patch ကိုလည်း update လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Security ပိုင်းကို update လုပ်ထားတာကတော့ Oneplus 5T မှာရောပါပဲ။ Oneplus 5T ရဲ့ update အကြောင်းအနည်းငယ်စူးစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ link ကသွားရောက်နိုင်ပါတယ်။
OxygenOS Open Beta3update ရဲ့ Detail ကျကျသိချင်သူတွေနဲ့ Update လုပ်ရမယ့်ပုံစံကို တိုင်ပတ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အောက်ပါ link ကအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။
Oneplus5oxygenos Open Beta 3
Firmware Updates, Oneplus, Smartphone
Apple မှ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကို ပြန်လည်ဖြေရှင်း
Micromax နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဇန်နဝါရီလထဲမှာ Android Go smartphone တွေကိုစျေးအတင့်တင့်နဲ့ဖြန့်ချီတော့မယ့် Google!